Isiike Igbe, Igbe Nkwakọ, Igbe Onyinye - Hanmo
Kpalie ọchịchọ ịmata ihe maka ihe nkiri ọhụụ ma nwee ọ itụ na ya.
Iji gosipụta ma kọwaa ọrụ nka nwere oke mma na mkpa akụkọ ihe mere eme,
Dị ka manfacturer anyị nwere ike na-akwado OEM, ODM na R & Dsolution.
Anyị na-ahụ na-enye ihe kasị mma mma ngwaahịa na ọrụ niile anyị na-akwado.
Na imepụta ihe dị ukwuu nke na-eme ka ụbọchị nnyefe dị mkpụmkpụ.
Kemgbe 2010, Hanmo na-anọchite anya okike na ogo. Anyị na-enye onye-nkwụsị mbukota ngwọta maka okomoko nkwakọ na-ebi akwụkwọ na ngwaahịa. Anyị maara ya nke ukwuu na ịpụpụ ndị ahịa taa, ị ga-erurịrị "isi ihe". N'ihe karịrị afọ 10 nraranye, Hanmo na-anya isi na ikike anyị nwere iji dọta uche ndị ahịa.
Good Quality China N'ogbe High Quality ...
Fewbọchị ole na ole gara aga, Russia chọpụtara ngwaahịa Lego Star Wars ọhụrụ. Ihe dị na igbe onyinye bụ ihe omimi, mana ọ dị ka igbe pụrụ iche nke ụlọ ahịa LEGO kwadoro na mmekorita ...
Kedu usoro iji hazie nke gị ...
Mpempe akwụkwọ njirimara onwe ya na-abụkarị ebe a na-ahụkarị taa, site na nnukwu ụlọ ọrụ na obere azụmaahịa, ha niile chọrọ iwulite aha ụlọ ọrụ nke aka ha site na nkwakọ ngwaahịa ya. Dị ka nkwakọ bụ ea ...
Ọ bụrụ na nkwakọ ngwaahịa gị nwere ike ịkọwapụta ma ọ bụ eco ...
Egwuregwu dị mma na gburugburu ugbu a na-abụ ihe na-ewu ewu, ọtụtụ mmadụ na-eche banyere ya kwa ụbọchị, ebe anyị na-eche ihu na-ebute ọdachi ndị na-emebi mbibi nke okike site n'aka anyị. Maka anyị, dịka onye na-emepụta pac ...
Nkwakọ ngwaahịa dị ka ihe nchebe maka ngwaahịa dị n'ime, agbanyeghị, na mmepe nke akụ na ụba ụwa, nkwakọ ngwaahịa ga-agbakwunye uru ọzọ. Iguzo iche na ahia ndi ahia taa, i ...